Hatramin’ny niarovany ny fahalalahana maneho hevitra, nodian’ny mpilaza vaovao tao Makedonia fanina ilay mpihira hip-hop malaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2020 12:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, বাংলা, Swahili, македонски, Français, čeština , English
Matetika nodokadokafan'ireo fampahalalambaovao any aminy noho ny famindrany, mahaliana mandrakariva amin'ny maha-naman'ny mpanao “bodybuilding” iray ao amin'ny fiandraiketana ny fiarovana manokana ny praiminisitra azy [tamin'izany fotoana izany] – izay niseho ihany koa tany anatin'ny iray tamin'ireo lahatsarin-kiran'i Toni – sady lasibatr'ireo fampahalalambaovao ao an-toerana any amin'ireo firenena izay nandraisany anjara tamin'ny fanatontosana ilay dika ao amin'ny faritra ho an'ny Survivor, natetika hita teny anaty lohateny lehiben'ny gazety i Toni Zen, sy teny anaty fahitalavitra. Efa tafapetraka ho filamatra iray ho an'ny ankizy teny anaty kahie mihitsy aza izy, niaraka tamn'ireo fampisehoany nampitolagaga tao amin'ilay toerampilalaovana lehibe indrindra ao Skopje.
Zen no olona malaza tian'ny vondrom-piarahamonin'ireo filazambaovao makedoniàna indrindra ny niresaka azy, mandrapahatongan'ilay andro iray tamin'ny Martsa 2013 namoahan'ilay artista hip-hop ny lahatsarin'ilay hirany vaovao, nomeny lohateny hoe “Sous Contrôle” (Под контрола), izay vakiantsika etsy ambany ny tonony. Nanomboka teo ilay mpiangaly mozika dia zara raha hita teny anaty fampahalalambaovao tao Makedonia sy ireo firenena manodidina azy, na dia nahita fahombiazana be tokoa teny anivon'ireo mpankafy azy aza ilay hirany.
Ny fanakendàna ny fahalalahana maneho hevitra sy ireo tsy fitoviana sôsialy misy ao Makedonia no avy hatrany dia anaovan'ilay hiran'i Zena sy ilay lahatsariny sahisahy resaka tsy loabody, arahany fanondroana sary sy feo amin'ireo asan'ilay Amerikàna mpanao hatsikana George Carlin sy ilay Britanika mpanoratra George Orwell. Nahazo fihobiana avy amin'ny mpitsikera ilay lahatsary, ary voafidin'ireo mpitsara ny Zlatna Buba Mara, ilay hetsika isantaona malaza, ho ny lahatsary tsara indrindra ho an'ny taona 2013. Saingy vitsy ny olona afaka nahita azy, satria saiky tsy hita mihitsy any anatin'ireo media mahazatra ao Makedonia ilay izy. Mihitsoka aloha izao ny seho an-tsehatr'ilay artista ary zara raha miseho amin'ireo fampisehoana natao ho an'ny daholobe izy.
[Fanamarihan'ny mpandika : Ny lahatsoratra niaingàna, navoaka ihany koa ao amin'ny GV amin'ny fiteny makedoniàna, no nanampy tamin'ny fiverenan'ny fifantohan'ny media hijery an'i Toni Zen, fa tamin'ny resaka fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny fireneny kosa tamin'ity indray mitoraka ity.]